XOG: Itoobiya oo warbaahinta Somalia u gudbisey istaraatijiyad cusub oo loo tebinayo wararka Somalia-Itoobiya (Saxaafadda Muqdisho oo ay la kulantay & qodobbo ay soo gudbisey!) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka XOG: Itoobiya oo warbaahinta Somalia u gudbisey istaraatijiyad cusub oo loo tebinayo...
XOG: Itoobiya oo warbaahinta Somalia u gudbisey istaraatijiyad cusub oo loo tebinayo wararka Somalia-Itoobiya (Saxaafadda Muqdisho oo ay la kulantay & qodobbo ay soo gudbisey!)
(Muqdisho) 09 Maarso 2019 – Waxaa goordhow Muqdisho ku afjarmay kulan ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kaas oo u dhaxeeyay diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Itoobiya ee Xamar iyo qaar kamid ah agaasimeyaasha warbaahinta Muqdisho.
Kulanka oo soconayey muddo dhowr saacadood ah ayaa looga gol lahaa in udubka loogu dhigo istaraatijiyad cusub oo ay Itoobiya doonayso in lagu wajaho marka la tebinayo wararka la xiriira Itoobiya iyo Somalia.
Arrintan ayaa qayb ka ah qorshe ay Itoobiya ku doonayso inay Soomaalida dareensiiso inay ka dhab tahay wax ay ku sheegtay ”isbedel ka dhaca Geeska Afrika” oo ah gobolka ugu xasaradda badan Afrika, gaar ahaan colaadda guunka ah ee u dhaxeeyso Soomaalida iyo Amxaarada.
Madaxda warbaahinta ayaa loo soo gudbiyay ilaa 4 qodob oo laga codsaday inay hadda kaddib ku wajahaan wararka gobolka kuwaasoo kala ah:
1 – In Itoobiya uu ka dhacay isbeddal ku saleysan nabad iyo wada nolaasho gobalka ah, lana soo afjaro wax kasta oo dagaal ama cadowtinimo ah oo ka dhaxeeyay wadamada deriska ah.
2 – In Soomaaliya iyo Itoobiya aysan kala maarmin ayna hogaamiyaasha labada dal ku heshiiyeen is dhaxgal dadweyne, horumarin ganacsi iyo in laga wada shaqeeyo nabadda Geeska iyo tan labada dal.
3 – In umadda Itoobiya iyo tan Soomaaliya qalbiyadooda laga tir tiro waxyaabihii xumaanta iyo colaadda ahaa ee soo maray labada dal.
4 – In Warbaahinta Soomaalida ay ka qayb qaadato sidii loo dhisi lahaa waddo shacabka labada dal gaarsiin karta is jeceyl iyo inay kuwada noolaadaab derisnimo iyo Iskaashi buuxa oo dhan bulsho iyo mid dhaqan dhaqaale ah.
Dad badan ayaa qaba inay ku wanaagsanayd inay saxaafadda Soomaalida arrintan usoo bandhigto DF Somalia, halkii uu dal shisheeye u sheegi lahaa istaraatijiyadda saxaafadda Somalia ku wajahayso isla dalkaasi. Waloow aan la ogayn inay shirkan la socoto DF iyo in kale.
Previous articleGABILLEY: Askari rasaas nool ku furay wiil weriye ah (Daawo)
Next articleMa Somalia ayaa la noqotay dacwaddii Maxkamadda ICJ? (Jawaab kasoo baxday Maxkamadda)